SEZVAUNGAVE uchiziva, vanhu nhasi vanokwegura, vanorwara, vofa. Kunyange vamwe vana vanofa. Unofanira kutya kufa here kana kuti kutya mumwe munhu akafa?— Unoziva zvinoitika kana tikafa here?—
Zvechokwadi, hapana munhu mupenyu nhasi akambofa akamuka kuti atiudze nezvazvo. Asi, Jesu, Mudzidzisi Mukuru, paakanga ari pasi pano, paiva nomunhu akambofa akamuka. Tinogona kudzidza pamusoro pezvinoitika kune vanenge vafa nokuverenga nezvake. Murume wacho akanga ari shamwari yaJesu uye aigara muBhetani, taundi duku iri pedyo neJerusarema. Zita rake ainzi Razaro, uye aiva nehanzvadzi mbiri, Marita naMariya. Ngatione zvinonzi neBhaibheri zvakaitika.
Rimwe zuva Razaro anorwara zvikuru. Panguva iyoyo, Jesu ari kure. Saka Marita naMariya vanotumira munhu kuti anoudza Jesu kuti hanzvadzi yavo, Razaro, iri kurwara. Vanoita kudaro nokuti vanoziva kuti Jesu anogona kuuya ozoporesa hanzvadzi yavo. Jesu haasi chiremba, asi ane simba rinobva kuna Mwari zvokuti anogona kuporesa urwere hwemarudzi ose.—Mateu 15:30, 31.
Zvisinei, Jesu asati aenda kunoona Razaro, Razaro anorwara kwazvo zvokuti anofa. Asi Jesu anoudza vadzidzi vake kuti Razaro akarara uye kuti achaenda kunomumutsa. Vadzidzi havanzwisisi kuti Jesu ari kurevei. Saka Jesu anotaura pachena kuti: “Razaro afa.” Izvi zvinoratidzei nezvorufu?— Hungu, kuti rwakaita sehope huru. Ihope huru kwazvo dzokuti munhu wacho haamboroti.
Jesu zvino ari kuuya kuzoshanyira Marita naMariya. Shamwari zhinji dzemhuri yacho dzatosvika. Vauya kuzonyaradza vaviri ava nokuti vafirwa nehanzvadzi yavo. Marita paanonzwa kuti Jesu ari kuuya, anoenda kunosangana naye. Nokukurumidza Mariya anobudawo kuti anoona Jesu. Akasuruvara kwazvo uye ari kuchema, uye anowira patsoka dzake. Dzimwe shamwari dzatevera Mariya dziri kuchemawo.
Mudzidzisi Mukuru anobvunza kuti vaisepi Razaro. Ipapo vanhu vanotungamirira Jesu kubako kwavigwa Razaro. Jesu paanoona vanhu vose vachichema, anotanga kuchemawo. Anoziva kurwadza kwazvinoita kufirwa nomunhu waunoda.
Dombo rakavhara pamuromo pebako racho, saka Jesu anoti: “Bvisai dombo.” Vanofanira kubvisa here?— Marita haafungi kuti ipfungwa yakanaka. Anoti: ‘Ishe, anofanira kunge ave kunhuhwa panguva ino, nokuti ave nemazuva mana akafa.’
Asi Jesu anoti kwaari: “Handina kukuudza here kuti kudai waizotenda waizoona mbiri yaMwari?” Jesu anoreva kuti Marita aizoona chimwe chinhu chaizounza mbiri kuna Mwari. Jesu achaitei? Dombo parinobviswa, Jesu anonyengetera zvinonzwika kuna Jehovha. Zvino Jesu anoti nenzwi guru: “Razaro, buda!” Aizobuda here? Aigona here?—
Unogona kumutsa munhu akarara here?— Hungu, kana ukadanidzira nenzwi guru anomuka. Asi unogona kumutsa munhu akarara hope dzorufu here?— Aiwa. Pasinei nokuti unodanidzira nenzwi guru sei, munhu akafa haazonzwi. Hapana chinhu icho iwe kana ini kana mumwe munhu ari panyika nhasi anogona kuita kumutsa vakafa.
Chii chaitwa naJesu kuna Razaro?
Asi Jesu akasiyana. Ane simba chairo rinobva kuna Mwari. Saka Jesu paanodana Razaro, chinhu chinoshamisa chinoitika. Murume anga akafa kwemazuva mana anobuda mubako! Anodzorerwa kuupenyu! Ava kugona kufema uye kufamba nokutaura zvekare! Chokwadi, Jesu anomutsa Razaro kubva kuvakafa.—Johani 11:1-44.
Zvino pafunge: Chii chakaitika kuna Razaro paakafa? Pane chimwe chinhu—mweya kana kuti mudzimu—chakabuda mumuviri wake ndokuenda kunogara kune imwe nzvimbo here? Mweya waRazaro wakaenda kudenga here? Akanga ari mupenyu kwemazuva mana kudenga ikoko naMwari nengirozi tsvene here?—
Aiwa, akanga asiri. Yeuka, Jesu akati Razaro akanga akarara. Unonzwa sei kana wakarara? Kana wakarara hope huru, hauzivi zvinenge zvichiitika pauri, unoziva here?— Uye paunomuka, haumbozivi kuti wave wakarara kwenguva yakareba sei kuzosvikira watarisa wachi.
Zvakadarowo nevanhu vakafa. Havana chavanoziva. Hapana chavanonzwa. Uye hapana chavanogona kuita. Ndizvo zvazvaive zvakaita kuna Razaro paakanga akafa. Rufu rwakaita sehope huru zvokuti munhu hapana chaanoyeuka. Bhaibheri rinoti: “Vakafa havana chavanoziva.”—Muparidzi 9:5, 10.
Razaro anga ari muchimiro chakaita sei paanga akafa?
Imbofungawo kuti: Dai Razaro akanga ari kudenga kwemazuva mana iwayo, aidai asina kumbotaura chimwe chinhu nezvazvo here?— Uye kudai akanga ari kudenga Jesu aizodai akamudzosa pasi pano kubva kunzvimbo yakanaka kudaro here?— Chokwadi aisazodaro!
Asi, vanhu vazhinji vanotaura kuti tine mweya, uye vanoti mweya wacho unoramba uchirarama pashure pokunge muviri wafa. Vanoti mweya waRazaro wakanga uri mupenyu kune imwe nzvimbo. Asi Bhaibheri haritauri kudaro. Rinoti Mwari akasika munhu wokutanga Adhamu “mweya mupenyu.” Adhamu akanga ari mweya. Bhaibheri rinotaurawo kuti Adhamu paakatadza, akafa. Akava “mweya wakafa,” uye akadzokera kuguruva raakanga agadzirwa naro. Bhaibheri rinotaura kuti vana vaAdhamu vose vakagarawo nhaka yechivi norufu.—Genesisi 2:7; 3:17-19; Numeri 6:6; VaRoma 5:12.
Saka sezviri pachena, hatina mweya wakaparadzana nomuviri wedu. Mumwe nomumwe wedu ndiye mweya. Uye sezvo vanhu vakagara nhaka yechivi kubva kumunhu wokutanga Adhamu, Bhaibheri rinoti: ‘Mweya unotadza uchafa.’—Ezekieri 18:4.
Nei pasina chikonzero chokutya vanhu vakafa?
Vamwe vanhu vanotya vakafa. Havatomboswederi pedyo nemakuva nokuti vanofunga kuti vakafa vane mweya yakaparadzana nemiviri yavo ingakuvadza vapenyu. Asi munhu akafa anogona kukuvadza munhu mupenyu here?— Aiwa, haagoni.
Vamwe vanotodavira kuti vakafa vanogona kudzoka semidzimu kuzoshanyira vapenyu. Saka vanogadzirira vakafa zvokudya. Asi vanhu vanoita izvozvo havadaviri chaizvo izvo Mwari anotaura pamusoro pevakafa. Kana tichidavira izvo Mwari anotaura, hatimbotyi vakafa. Uye kana tichionga Mwari zvechokwadi nokuda kwoupenyu, tichazviratidza nokuita zvinhu zvinodiwa naMwari.
Asi pamwe zvingakunetsa kuti: ‘Mwari achadzosa vana vakafa kuupenyu here? Anoda here zvechokwadi?’ Ngatizvitaure muchikamu chinotevera.
Ngativerengezve muBhaibheri pamusoro pezvakaita vakafa uye pamusoro pokuti munhu mweya pana Pisarema 115:17; 146:3, 4; naJeremiya 2:34.
Jesu airevei paakati vaya vanotenda maari ‘havazombofi’?